Qoys saddex bilood ku xayiran garoonka diyaaradaha Bangkok | Maalmahanews
Image captionSuvarnabhumi waa garoonka diyaaradaha ugu wayn Thailand
Sida ay sheegtay waaxda socdaalka Thailand, qoyska waxay ka kooban yihiin afar canug oo ka yar 11-sano iyo afar qof oo waawayn. Waxay Bangkok galeen bishii May, balse hadda waxay diidan yihiin in dalkooda dib loogu celiyo “cabsi aawadeed”.
Farriinta oo hadda la tirtiray, Kanaruj Artt Pornsopit, wuxuu ku sheegay in qoyska ay eelaboorka ku noolaayeen ku dhowaad seddax bilood “sababo la xiriira xasillooni darrada dalkooda ka jirta”.
“Waxaan dhammaan idiin rajeynayaan in dalkiina macaan si degdeg ah ugu noqotaan”, ayuu yiri.
Image captionShaqaalaha garoonka ayaa qoyska siiyo cunto iyo caawinta kale ee ay u baahan yihiin
Image captionDabaaldegyo ayaa ka dhacay Zimbabwe, markii Mugabe uu is casilay
Qoyskan waxay diidan yihiin in Zimbabwe lagu celiyo, waxayna sheegayaan in ay ka baqayaan “in la dilo” ka dib qalalaasihii Nofembar ee xilka looga tuuray Mugabe oo 37 sano dalkaasi xukumayay.